नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा. विवेक खत्रीको नि’धन – Sandesh Press
नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा. विवेक खत्रीको नि’धन
December 26, 2020 345
काठमाडौं, विरेन्द्र सैनिक अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा. विवेक खत्रीको नि’धन भएको छ । ४४ वर्षका डा. खत्रीको सै’निक अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज बिहान मृ’त्यु भएको हो । डा.खत्रीलाई मु’टुको स’मस्या थियो । उहाँ विगत १५ वर्षदेखि सरकारी सेवामा हुनुन्थ्यो । उहाँ व’योधा अस्पतालमा पनि कार्यरत हुनुन्थ्यो । उहाँकी श्रीमती द’न्तरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । डा.खत्रीका एक छोरा र एक छोरी हुनुहुन्छ ।
आर्थिक मा’मिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आ’ङ्बोलाई प्र’देश एकका मुख्यमन्त्री शे’रधन राईले प’दमुक्त गरेका छन् । मु’ख्यमन्त्रीको का’र्यालयले भर्खरै जानकारी गराउँदै प’दमुक्त ग’रिएको जानकारी दिएको छ । आ’ङ्बो पू’र्वमाओवादी नेता पनि हुन् । उनी अहिले प्रचण्ड–नेपाल स’मूहमा छन् । मन्त्री आङ्बोले राईवि’रुद्ध अ’विश्वासको प्रस्तावका लागि ह’स्ताक्षर अ’भियान चलाएका थिए । आइतबार नै राईवि’रुद्ध अ’विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६९ को (२) (ख) ब’मोजिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मा’मिला तथा यो’जना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीले प’दमुक्त गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिए ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा वि’घटन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई स’मूहमा वि’भाजित भएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा स’मूह र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको अर्को स’मूह बनेको छ । मुख्यमन्त्री राई ओली स’मूहका हुन् ।
Prevभोलीको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल पौष १२ गते आईतबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
Nextबिरामी अनिता खड्काको भगवान बनेर अस्पताल पुगेकी गायिका अन्जु पन्त भक्कानिएर रुन थालिन,उपचार गर्ने पैसा नभएपछि बिनोद काममा गए